May 2, 2019 – KhabarChakra
करेन्ट लागेर एकको मृत्यु, पाँच घाइते
संखुवासभा, १९ बैशाख । संखुवासभामा स्वाचीमा विद्युत सर्ट हुदा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना घाईते भएका छन् । बुधवार बेलुका सभापोखरी गाउँपालिका–६मा मोवाइल चार्ज गर्ने क्रममा अचानक भोल्टेज धेरै आई करेन्ट लागेर २३ वर्षीय भुपाल वि।कको मृत्यु भएको संखुवासभा प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल खाँदवारीमा उपचारको क्रममा राति १० बजे उनको मृत्यु भएको जनाएको[Read More…]
by KhabarC —	May 2, 2019 —	0 comments —	गृहपुष्ठ
काठमाडौँ, १९ वैशाख । आज बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै, आज चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ७ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ[Read More…]
by KhabarC —	May 2, 2019 —	0 comments —	अर्थ
काठमाडौँ, १९ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर निम्नानुसार रहेको छ,
नारायण ढुङ्गाना काठमाडौँ, १९ वैशाख । आफन्त बिरामी हुँदा प्रयोग हुने सिटामोल, ट्याबलेट तथा क्याप्सुलका पत्ता(खोल) तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? सिधै डष्टबिनमा पठाउनुहुन्छ होला, तर त्यही पत्ता उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा थोरैलाई मात्रै थाहा होला । एकजना भारतीय कलाकार वीमान नागले भने त्यही पत्तालाई प्रयोग गरी आकर्षक मूर्ति बनाएर उदाहरणीय बन्नुभएको छ । उहाँका यी मूर्तिहरु अहिले काठमाडौँको नेपाल कला[Read More…]
जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हुम्लाका दुई महिलाको बुधबार हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । बुधबार बिहान कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसहितको टोली हुम्ला पुगेर चङ्खेली गाउँपालिका–६ स्थित मेल्छाम स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमी निशा नेपाली र ओदानचुली गाउँपालिका–१ का ३५ वर्षीया राजकला महतारालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको हो । १४ गते राति २ बजेदेखि उच्च रक्तस्रावले अनमी नेपाली थला पर्नुभएको थियो[Read More…]
बाँके, १९ वैशाख । बाँके जिल्लामा वंशजका आधारमा वितरण गरिएका झण्डै ३०० नागरिकता खारेजीमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार, रझेना, खजुराखुर्द र मनिकापुरका ती नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एउटा आदेशले तराई मधेसलगायतका विभिन्न जिल्लामा कानूनविपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बाँकेका झण्डै ३०० नागरिकता खारेजीमा परेका हुन्[Read More…]
काठमाडौं – खुलामञ्चमा अवैध सटर बनाउने जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका सञ्चालक मनोज भेटवालले अकासे पुलबाट मात्रै काठमाडौं महानगरलाई वार्षिक साढे चार करोड रुपैयाँ घाटा लगाउने गरेको खुलेको छ । नयाँ बसपार्क र टुँडिखेलआसपासका अकासे पुलको लिज सम्झौतामा चलखेल गरी उनले १५ वर्षअघिदेखि रकम असुल्दै आएका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार रकम असुल्ने धन्दामा मनोज भेटवालका दाइ भैरव भेटवाल पनि संलग्न छन्[Read More…]
by KhabarC —	May 2, 2019 —	0 comments —	पत्रपत्रिकाबाट
भागबन्डामा सहमतिः नेकपा पोलिटब्युरोमा कुन समूहका को ?
काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जिल्ला एकीकरण टुंगिएलगत्तै शीर्ष नेतृत्वको पोलिटब्युरो सदस्य चयनमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अमेरिका जानुपूर्व पोलिटब्युरो गठनमा सहमति जुटेको हो । नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग भएको छलफलका क्रममा तत्कालीन एमाले र[Read More…]
पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गाउँगाउँमा पु९याएर पर्यटनमय बनाउने र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै बिनाअध्ययन होमस्टेलाई ३० करोड रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ । सरकारले बजेट दिँदा होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेको छैन । पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै रकम उपलब्ध गराइएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा सन्तोष पोखरेलले लेखेका छन् ।[Read More…]
उपत्यकामै अझै पनि छ झारफुकको चलन !
काठमाडौँ – चिकित्सा विज्ञानमा झारफुकको कुनै स्थान नभए पनि अझै पनि झारफुकले धेरैको बिमार निको हुन विश्वास हटेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । राजधानी उपत्यकामै बालबालिका बिरामी पर्दा झारफुक गर्ने चलन छँदैछ । नेपाल देवता, अजिमा आदिले छुने भन्दै झारफुक गरिन्छ र कतिपय माता भनिने वा अरूको समेत पेशा जस्तै बनेको छ झारफुक । जयवागेश्वरीमा डोनट[Read More…]